अधबैसे महिलालाई प्रेमको प्रेममा पर्दा ङठिलेन शेर्पा पुगे कोमामा ! | News Nepal
अधबैसे महिलालाई प्रेमको प्रेममा पर्दा ङठिलेन शेर्पा पुगे कोमामा !
काठमाडौं । भोटेकोशी डाँडा गाउँका ङठिलेन शेर्पा प्रहरीको गिरफ्तारपछि भिरबाट खसेर गम्भिर घाइते भएका छन् ।
शेर्पा घाइते भएपछि परिवारको सहयोगमा सिन्धुपाल्चोक सिमा प्रहरी कार्यालय दश किलोबाट शिक्षण अस्पताल महाराजंगमा भर्नापछि मेजर अप्परेशन गरिएको छ ।
शेर्पाको टाँउकोमा गहिरो चोट लागेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । उनको दाहिने पाखुरा समेत भाँचिएको छ । उनी महाराजगंज शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा उपचारत छन । उनको उपचार उनकै दिदी भिनाजुले गरिरहेको परिवार स्रोतले दावी गरेको छ ।
शेर्पा शिक्षण अस्पतालको बेडमा जिवन मरणको दोसाधमा रहदाँ समेत प्रहरी र जाहेरी कर्ताहरु बेखवर हुनु आश्र्चायको विषय भएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर कार्यालय तर्फ ल्याउदै गर्दा भिरबाट खसेका शेर्पालाई उपचार गराउनुको सट्टा उनलाई परिवारको जिम्मा गलाएर उम्कन खोजेको देखिन्छ ।
सामान्य दुर्घटना भएको मानिसलाई समेत प्रहरीले अस्पतालमा उपचार गराउन लैजानु पर्नेमा प्रहरीकै सामु भीरबाट खसेका व्यक्तिको उपचार गर्नुको सट्टा प्रहरी उम्कन खोज्नुले प्रहरी अधिकारी प्रति नै शंकाको ठाउ दिएको छ ।
घटना विवरण अनुसार अविवाहित शेर्पाको गाँउकै श्रेष्ठ परिवारका एक विवाहित अन्दाजी ३८ वर्ष जतिकि अधबैशे महिलासँगको प्रेम सम्बन्ध थियो । विवहापछि माइती घरमा बस्दै आएकी श्रेष्ठलाई शेर्पाले दिदी भिनाजुको घर बोक्चेनमा भगाएर लुकाउन ल्याएका थिए । दिदी भिनाजुको घरमा आउनै नपाइ उनी प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेको वारिवारीक स्रोतले दावी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार शेर्पालाई बोक्चेनबाट सिन्धुपाल्चोक नामथाङग प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले पक्राउ गर्दै सिमा प्रहरी कार्यालय दशकिलो ल्याउदै गर्दा शेर्पा प्रहरीकै घेराबाट अन्दाजी ३० किलो मिटर जति भिरबाट खसेका थिए । नारायण थान प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश यादवले शेर्पालाई अपशब्द प्रयोग गर्दै तथानाम गालि गलौज गरेका थिए ।
रगतले लतपतिएका शेर्पालाई औषिधि उपचार गराउनु भन्दा पनि प्रहरीले शेर्पालाई नाटक गरेको जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै पानी छ्याप्ने काम गरेर अमानविय व्यवहार गरेको स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्रहरीले घटना भएको धेरै लामो समयपछि श्रेष्ठ केटीलाई माइतिको जिम्मा लगाएका थिए भने, शेर्पालाई पनि उपचार गराउन अस्पताल लैजानु पर्ने विरामिलाई दिदी भिनाजुको जिम्मा लगाए । दिदी भिनाजुले केहि आफ्न्तहरुको सहयोगमा शेर्पालाई काठमाडौ शिक्षण अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराउदै छन तर शेर्पा भने अचेत छन ।
शेर्पालाई श्रेष्ठ परिवारका सदस्यहरुले सुनिता श्रेष्ठलाई शेर्पाले अपहरण गरेको भन्दै संगिता, रामकाजी र गोविन्दले प्रहरीमा जाहेरी दिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
केटी पक्ष, पक्राउ गर्ने प्रहरीपक्षलाई वडा कार्यालयले छलफलका लागि बोलाउदा कोहि पनि नआएको वडा कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
यसै सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख एसपी मुकुन्द मरासीनी भन्छन“ घटना घटेको सत्य हो । मानिस अपहरण परेको जाहेरी प्रहरीमा आएपछि मानिस खोजि गरेर प्रहरी कार्यालयमा ल्याउदै गर्दा मानिस ढलेर भिरतिर खसेको हो । उ छारेरोगको विरामि भएका कारण ढलेको हो । उनलाई प्रहरीले कुनै पनि अमानविय व्यवहार गरको छैन । प्रहरीले हराएको मानिस खोज्यो भेटाएपछि आ–आफ्ना परिवारका मानिसलाई जिम्मा लगाएको हो । यसमा प्रहरीको कुनै दोस नरहेको बताउदै उनी उम्कन खोजे ।”
स्वेता खड्काले रवि लामिछानेलाई दाई सम्बोधन गर्दै यस्तो लेखेपछि…
काठमाडाैं । अभिनेत्री स्वेता खड्काले रवि लामिछानेलाई हिरासतमा भेटेकी छन् । चितवन पुगेर रविलाई भेटेपछि स्वेताले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै...
सिंहदरबारमा मृत भेटिएका बच्चुको सुसाइड नोटः कसैको कारण मैले आत्महत्या गरेको होइन !
काठमाडाैं । सिंहदरबारमा मृत भेटिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका नायब सुब्बा बच्चु केसीले सुसाइड नोट लेखेको भेटिएको हो । सुसाइड नोटमा...
पूर्वयुवराज पारस शाहले विमानस्थल मै प्रहरीमाथि हातपात गरेपछि…
काठमाडाैं । पूर्वयुवराज पारस शाहले त्रिभुवन विमानस्थलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गरेका छन् । आमा र छोराछोरीलाई थाइल्याण्ड जान लागेका...
बालुवाटार प्रकरणः किर्ते तमसुकलाई तीन न्यायाधीशद्वारा सद्दे ठहर
काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हत्याउने प्रमुख योजनाकार भनी किटिएका शोभाकान्त ढकालले तयार पारेको किर्ते तमसुकलाई तीन न्यायाधीशले ‘सद्दे’...
जनयुद्धको क्रममा दोरम्बामा मारिएका १९ जनाको प्रतिमा अनावरण
रामेछाप । दोरम्बा हत्याकाण्डमा मारिएका १९ जनाको प्रतिमा अनावरण गरिएको छ । रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन शाही सेनाले तत्कालीन जनसरकार प्रमुख...